Kendall Jenner trypophobia ကြုံတွေ့နေကြရသည်
ငါတို့ရှိသမျှသည်အရာတစ်ခုခု, အောင်မြင်သောမော်ဒယ် Kendall Jenner ၏ကြောက်လန့် - မပါချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမိန်းကလေးသူမသေးငယ်တဲ့အပေါက်ပြွတ်ကိုကြောက်သည်, တစ်ဦးမျှမျှတတရှားပါး phobia ထံမှကြုံတွေ့နေကြရသည်။
အကြောင်း trypophobia အဖြစ်မှန်တီဗီကြယ်ပွင့်ကသူ့ဘလော့ဂ်အတွက်သို့ပြောသည်။ 20 နှစ်အရွယ် Kendall သူမ၏ဆွေမျိုးများနှင့်မိတ်ဆွေများပြဿနာအကြောင်းကိုသိသောကဆိုသည်။ သူတို့ထိတ်လန့်အတွက်သူမ၏ဦးတည်သွားစေကြောင်းသေးငယ်တဲ့အဖွင့်ရှိသည်ကြောင့်သူတို့ဟာတစ်ဦးစိမ်းလန်းစိုပြေခြင်းနှင့် airy pancakes နှင့်အတူသူမ၏များ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ပန်းကန်ထားဘူး။
ထို့အပြင်ထိပ်တန်းမော်ဒယ်တစ်ဦးကလာပ်စည်းများနှင့်ကြာမျိုးစေ့များကိုကြည့်လို့မရပါဘူး။ အပြင်ကသူမ၏စိတ်ရှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေ Kendall said:
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး phobia စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအထိဤအသိအမှတ်မပြုပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒါဟာထိတွေ့နေသောလူများ, အလွန်စစ်မှန်သောအီခံစားရတယ် - ဦးနှောက်အာရုံကြောတုန်တုန်ယင်ယင်, ပျို့, မူးဝြေခင်း, ယားယံအရေပြားကို။ Kendall ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သူမရဲ့ "ကြောက်မက်ဘွယ်သောစိုးရိမ်စိတ်။ " ဖုံးလွှမ်း
immodest စားဆင်ယင်အတွက် Kendall Jenner မိမိအဝတ်အချည်းစည်းခန္ဓာကိုယ်ကျော် grid
Caitlyn Jenner သူမ၏ 48 ထက်အသက်ငယ်သောအရာလိင်မော်ဒယ်လက်ထပ်
Bella Hadid ရည်းစားဟောင်း Kendall Jenner နှင့်တွေ့ဆုံ
စကားမစပ်ကြောင့် phobias ခံစားနေရပြီး, ထိုအဆွေအမျိုး Kardashian-Jenner ၏တစ်ခုတည်းသောကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အစောပိုင်းက Chloe Kardashian စိတ်အားထက်သန်စွာသူမကသူ့ကိုယ်ပိုင်ခါးမကြိုက်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ သူမကထို့နောက်သူ့ကိုကွညျ့ရှုဖို့မကြိုးစားသည်ရေချိုးခန်းသို့ဝင်ပေမယ့်ဘယ်အချိန်မှာကအိမျတျောကိုဆင်းဆူညံအော်ဟစ်စတင်ခဲ့သည်အဖြစ်ကတန်ဖိုးရှိ Chloe မတော်တဆကြောင့်မထိနေပါသည်!
Caitlyn Jenner, Kris Jenner နှင့်အတူအိမ်ထောင်ရေးသစ္စာဂတိကို update လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထား
မဿဲ McConaughey တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်မှကထိကဖြစ်လာခဲ့သည်
မင်းသမီး Emma Watson ဟာ Cord သည် Overstreet နှင့်တွေ့ဆုံ
Hayden Panettiere: တစ်ကြာရှည်ကိန်းအောင်းရာ၏အဆုံး!
Kim Kardashian ၏မိခင်၏ဘုန်းအသရေဘို့သူမ၏အိမ်လုပ် porn ကိုရောင်း
Kayla Ewell အိမ်ထောင်မှာပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတွေ့ထားပါတယ်
သည် "Thrones ၏ဂိမ်း" ၏6၏နယူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ချက်များ
ပဲရစ်ဟီလ်တန်နဲ့ Chris Zielke ၏တက်ကြွသောအသက်တာကို: ညဥ့်ကလပ်အတွက်ပျော်စရာနဲ့ Lviv တစ်အနာဂတ်ခရီးစဉ်
Cara Delevingne ရဲဗြိတိန်မဂ္ဂဇင်း ELLE ၏အဖုံးပေါ်တွင်ပေါ်ထွန်းသော
Tom Cruise နဲ့သူ၏သမီး Suri ၏ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပေါ်မှာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
Kim Kardashian နဲ့ Kanye West ကသူ့ဇိမ်ခံအိမ်ကြီး Ukrainka ရောင်းချခဲ့
နားထဲမှာ "အညွန့်" - ဘာလုပ်သနည်း
သားသမီးတို့အဘို့နံနက်စာ - ကလေးတွေအဘို့အရသာနှင့်ကျန်းမာအစားအစာများချက်ပြုတ်ကိုအကောင်းဆုံးစိတ်ကူးများ
Tom Hanks ပြည်သူ့နှင့်အင်တာဗျူးတွင်အတွက်အနာဂတ်အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော
ရှာလကာရည်ထဲမှာကြက်သွန်နီစိမ်ဖို့ကိုဘယ်လို - savory မုများအတွက်အများဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
Aries နှင့် Capricorn - ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်လိုက်ဖက်မှု
Lenten pies - ချက်ပြုတ်နည်းများစုံလင်သောမုန့်စိမ်းနှင့်အရသာ toppings
ထှနျးလငျးပိုးစုန်းကြူး - နိမိတ်လက္ခဏာကို
ငွေကောက်ခံ Valentino Fall-ဆောင်းရာသီ 2015-2016
ကော်ဖီကိတ်မုန့် - အိမ်လုပ်အချိုပွဲ၏အရသာနှင့်မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများ
မိန်းမတကာတို့ထက် Abstinence - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး
ခြေနင်းဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. - အရှိဆုံးဖက်ရှင်ပုံရိပ်များတစ်ရွေးချယ်ရေး